1 Timoti 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba Yekutanga Kuna Timoti 4:1-16
4 Asi shoko rakafemerwa rinonyatsotaura* zvakajeka kuti munguva inouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera kutaura kwakafemerwa kunotsausa*+ nedzidziso dzemadhimoni, 2 neunyengeri hwevanhu vanonyepa,+ vane hana dzinoita sedzakapiswa nesimbi inoisa mucherechedzo. 3 Vanorambidza vanhu kuroorana+ uye vanorambidza vanhu zvekudya+ zvakasikwa naMwari kuti zvidyiwe+ nekuonga nevaya vane kutenda+ uye vanoziva chokwadi zvakarurama. 4 Nekuti zvisikwa zvese zvaMwari zvakanaka,+ uye hapana chinofanira kurambwa+ kana chichigamuchirwa nekuonga, 5 nekuti chinoitwa kuti chive chitsvene neshoko raMwari nekuchinyengeterera. 6 Kana ukapa hama mazano aya, uchava mushumiri waKristu Jesu akanaka, akarerwa nemashoko ekutenda needzidziso yakanaka yawakanyatsotevera.+ 7 Asi ramba ngano+ dzekumhura sedziya dzinotaurwa nechembere. Asi iva nechinangwa chekuzvidzidzisa kuzvipira kuna Mwari. 8 Nekuti kusimbisa muviri kunobatsira zvishoma, asi kuzvipira kuna Mwari kunobatsira pazvinhu zvese, sezvo kuine vimbiso yeupenyu huno neupenyu huchauya.+ 9 Mashoko iwayo ndeechokwadi uye anofanira kubvumwa zvakakwana. 10 Ndokusaka tiri kushanda nesimba, tichirwisa,+ nekuti takaisa tariro yedu pana Mwari mupenyu, anova ndiye Muponesi+ wevanhu vese,+ kunyanya wevakatendeka. 11 Ramba uchirayira nekudzidzisa vanhu zvinhu izvi. 12 Usarega munhu achikutarisira pasi nekuti uri mudiki. Asi iva muenzaniso kune vakatendeka, pakutaura, pakuzvibata, parudo, pakutenda, patsika dzakachena.* 13 Ramba uchishingairira kuverenga paruzhinji,+ kukurudzira, uye kudzidzisa, kusvikira ndauya. 14 Usarega kushandisa chipo chiri mauri chawakapiwa kuburikidza neuprofita, pakaiswa maoko pauri nedare revakuru.+ 15 Fungisisa zvinhu izvi; nyura mazviri, kuti kufambira mberi kwako kunyatsoonekwa nevanhu vese. 16 Ramba uchizvichenjerera iwe pachako, nekudzidzisa kwako.+ Ramba wakashinga pakuita zvinhu izvi, nekuti kana ukadaro uchazviponesa iwe pachako, nevaya vanokuteerera.+
^ Kana kuti “mweya unonyatsotaura.”
^ ChiGir., “mweya inotsausa.”
^ Kana kuti “pakuva akachena.”